egg | Ratopati
तौल घटाउन बिहानको नास्तामा अण्डा खानु कति सही ? access_timeमाघ १६, २०७७
एक कप तात्तो चिया वा कफीसँग अण्डा (अमलेट) पाउने हो भने दिनको सुरुवात गर्ने यो भन्दा राम्रो तरिका के होला ? अमलेट संसारभरी चर्चित एक विशेष खान्की हो । त्यसमा पनि अमलेटलाई धेरैले रुचाउँछन् । अण्डालाई धेरैले सुपरफूडको रुपमा मान्छन् । यसै कारण पकाएको अण्डालाई ...
एकदिनमा कतिवटा अण्डा खाँदा स्वास्थ्यमा पुग्दैन हानी ? access_timeमाघ २, २०७७
अण्डालाई सबैभन्दा स्वस्थबद्र्धक खाना मानिन्छ । यसमा पाइने सबै पोषक तत्वका कारण यसलाई सुपरफुड पनि भनिन्छ । एउटा अण्डामा चिकनमा पाइने बराबरको पोषक तत्व पाइन्छ । अण्डालाई धेरैजसो हाई कोलेस्ट्रोलसँग जोडेर हेरिन्छ त्यसैले मानिसहरु धेरै अण्डा नखान सल्लाह दिन्छन् । आउनुहोस्, अण्...
अण्डा खाने सही तरिका के हो ? तारेर कि उसिनेर ? access_timeअसोज १५, २०७७
अण्डा स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । कोही यसलाई पकाएर खान रुचाउँछन् भने कसैलाई उसिनेको अण्डा खान मनपर्छ । कतिलाई भने अण्डा आधा पाकेको मनपर्छ । मानिसहरु सबैभन्दा पहिला स्वादलाई प्राथमिकता दिन्छन् । स्मरण रहोस्, पकाएको र उसिनेको अण्डाको फाइदा भिन्न छन् । प्रश्न यो छ क...
विचौलियाको प्रभाव घटाउन अण्डाको भण्डारण access_timeसाउन १, २०७७
चितवन । कुखुरा पालक कृषकलाई विचौलियाको प्रभाव घटाउन अण्डाको भण्डारण र सहकारीमार्फत आवश्यक सामग्री बिक्री एवं कच्चा पदार्थ खरिदमा सहयोग गरिने भएको छ । नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घ केन्द्रीय समितिले भरतपुरको रामनगरमा रहेको आफ्नो जग्गामा बहुउद्देश्यिय भवन निर्माण गरि ती काम गर्न...
५० वटा अण्डा खाने बाजी पर्‍यो, ४२ वटा खाएपछि मृत्यु access_timeकात्तिक १९, २०७६
भारतको उत्तरप्रदेशको जौनपुरमा अण्डा खाने बाजी जित्ने चक्करमा ४२ वर्षका एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । मृतकको पहिचान सुभाष यादवको रुपमा भएको छ । शाहगंज कोतवाली इन्चार्ज जेपी सिंहका अनुसार सुभाष ट्र्याक्टर चलाउने काम गर्दथे । उनी आफ्ना साथीसँग अण्डा खान गएका बेला दुबैबीच क...